ICeltra: Shintsha i-Ad Creative Design Process | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoMashi 21, 2020 NgoLwesihlanu, Mashi 20, 2020 Douglas Karr
Ngokusho kweForrester Consulting, egameni leCeltra, ama-70% wabakhangisi basebenzisa isikhathi esithe xaxa ukudala okuqukethwe kokukhangisa kwedijithali kunokuba bebengathanda. Kepha abaphendulile babona ukuthi ukwenza okuzenzakalelayo kokukhiqiza kuzoba nomthelela omkhulu eminyakeni emihlanu ezayo ekwakhiweni kwezikhangiso, okunomthelela omkhulu ku:
Umthamo wemikhankaso yezikhangiso (84%)
Ukwenza ngcono ukusebenza kwenqubo / kokuhamba komsebenzi (83%)
Ukwenza ngcono ukufaneleka (82%)
Ukwenza ngcono ikhwalithi yokudala (79%)
Liyini Ipulatifomu Yokuphathwa Kobuciko?
Ipulatifomu yokuphatha yokudala (i-CMP) ihlanganisa amathuluzi wokukhangisa ahlukahlukene asetshenziswa ngabakhangisi bezokukhangisa nabezokukhangisa abe yipulatifomu eyodwa ehlangene, esuselwa emafini. Lawa mathuluzi afaka abakhi bezikhangiso abakwaziyo ukudala ubuciko obunamandla ngobuningi, ukushicilela iziteshi ezinqamula, nokukhangisa ukuqoqwa kwedatha nokuhlaziywa.
I-G2, Amapulatifomu Wokuphatha Okudala
I-Celtra is a Ipulatifomu Yokuphathwa Kwe-Creative (CMP) ngokwakha, ukusebenzisana nokwengeza ukukhangisa kwakho kwedijithali. Amaqembu we-Creative, media, ukumaketha kanye nama-ejensi anendawo eyodwa yokukala imikhankaso nokudala okunamandla kusuka kumathuluzi wamathuluzi omhlaba kuya kwabezindaba bendawo. Ngenxa yalokhu, ama-brand anganciphisa isikhathi sokukhiqiza futhi anciphise kakhulu iphutha.
Kuwo wonke amabhodi, sibone amaqembu wokumaketha nawokudala elwa kanzima uma kukhulunywa ngokuklama, ukukhiqiza, nokwethula imikhankaso yezokumaketha ngesilinganiso. Abamakethi kanye namaqembu e-Creative Operations bafuna ngenkuthalo isoftware yokuthuthukisa ukusebenza kahle kwenqubo, ukuhamba komsebenzi, ukukala nokufaneleka kokukhiphayo kwabo.
UMihael Mikek, uMsunguli nesikhulu Esiphezulu seCeltra
Ngenkathi ama-brand elwela ukuhambisana nezidingo zokudala zokumaketha nokukhangisa kwanamuhla, idatha iphinde iveze izixazululo eziningi ezizogcwalisa izikhala ezinhlelweni zazo zamanje futhi zikhonze izindawo ezishiywe zingavundululwa izindlela zazo ezikhona. Lapho becabanga ngamakhono angaxhasa kakhulu ukwenziwa nokwandiswa kokuqukethwe kokukhangisa kwedijithali, abaphenduli babefisa:
Ipulatifomu ebumbene yokulandelela ukukhiqizwa, ukusebenza, nokusebenza (42%)
Okuqukethwe kokudala okuzivumelanisa ngokusekelwe kudatha (35%)
Amamethrikhi / ukuhlolwa okwakhelwe ngaphakathi (33%)
Qhafaza okukodwa ukusatshalaliswa kokudala kuwo wonke amapulatifomu neziteshi (32%)
Ukuhamba kokuphela kokuphela kokudala kwedijithali okuningi (30%)
Izici zeCeltra eziyinhloko zifaka phakathi:
Kwenze - Umphumela wokudala owakhiwe ngamandla futhi uqhutshwa yidatha. Ipulatifomu isuselwe emafini ekukhiqizeni okwenziwa ngesikhathi sangempela. Abakhi bezikhangiso abanamandla nabakhi bamavidiyo banokuhlangenwe nakho kwendabuko, kokusebenzisana. Ukwakhiwa kwamathempulethi nokuphathwa ngezinto zokuqinisekisa ikhwalithi (QA) izici zakhelwe ngaphakathi.
Yiphathe - Thola ukulawula okugcwele phezu kwezinqubo zakho zokukhiqiza zedijithali nezinqubo zokusebenza ngokusebenzisa ipulatifomu eyodwa, esekwe efwini. Amathuluzi wokubambisana abonakalayo anokusetha nokubuka kuqala afakiwe kunqubo yokwakhiwa kwesikhangiso. Ukuphatheka kwempahla yobuciko kuyatholakala kuyo yonke imikhiqizo namafomethi. Ukusatshalaliswa kuyatholakala kuwo wonke amapulatifomu emidiya nakwezenhlalo ngokuphathwa okukhwabanisayo kokuhamba komsebenzi kanye nokuhlanganiswa okugcwele kwesiteji kwisitaki se-ad tech.
Linganisa - Hlanganisa idatha yokudala kuzo zonke iziteshi ukuletha idatha yokusebenza kumaqembu wokudala futhi unikeze ngemininingwane yokudala kumaqembu ezindaba Ipulatifomu inamamethrikhi wokubonisa ajwayelekile nevidiyo, umakhi wombiko nokubukwa ngedeshibhodi. Kukhona futhi ukuthekelisa ngobuningi noma i-API yokubika yokuhlanganisa imiphumela yokusebenza.
Tags: ukudala isikhangisoukukhangisa ngobucikoI-CeltraCMPyini i-cmp